Wararka Suuqa Kala Iisiga: Chelsea Oo Ku Sii Dhawaaneysa Jack Grealish, Kooxdee Ayuu Doonayaa Raheem Sterling Iyo Qodobo Kale
HomeWararka WargeysyadaWararka Suuqa kala iisiga: Chelsea oo ku sii dhawaaneysa Jack Grealish, Kooxdee ayuu doonayaa Raheem Sterling iyo Qodobo kale
June 16, 2021 Wararka Wargeysyada, Suuqa kala iibsiga 0
Milan ayaa u aqoonsatay weeraryahanka Stuttgart Sasa Kalajdzic inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Goolhayaha kooxda Wolves Rui Patricio ayaa heshiis shaqsi ah la gaaray kooxda Roma – sida laga soo xigtay Football Insider .
Arsenal ayaa diiday dalab £ 12.9 million (€ 15m / $ 18m) oo ku aadan xidiga Granit Xhaka oo kaga yimid Roma, sida ay qortay BBC .
Xiddiga garabka uga ciyaara Real Sociedad Mikel Oyarzabal ayaa mar kale diirada u saaran Manchester City, kaasoo u dhaqaaqi kara ciyaaryahanka reer Spain hadii Bernardo Silva ama Raheem Sterling ay xagaagan baxaan, ayuu qoray Eurosport .
Tottenham, Arsenal iyo West Ham ayaa xiiseynaya weeraryahanka Lazio Joaquin Corea, sida ay qortay Gazzetta dello Sport.
Ku biirista Rodrigo De Paul ee kooxda Atletico Madrid waa “heshiis la dhammeeyay” sida uu sheegayo Alfredo Pedulla.
Kooxaha Borussia Dortmund iyo Liverpool ayaa indhaha ku haya saxiixa xiddiga kooxda PSV Donyell Malen, sida ay qortay Sky Germany.
Anderlecht ayaa diiday dalabkii Arsenal ee ahaa 12.9 milyan oo euro ($ 18.1m) oo ay ku doonayeen ciyaaryahanka khadka dhexe Albert Sambi Lokonga, sida ay qortay ESPN .
Juventus ayaa weli isha ku heysa xiddiga Sassuolo Manuel Locatelli waxayna aaminsan yihiin in heshiis la gaari karo, sida ay qortay Tuttosport.
Liverpool ayaa rajeyneysa inay hesho koox iibsata Loris Karius xagaagan, sida ay qortay Liverpool Echo.
Xiddiga garabka uga ciyaara Bayern Munich ee Kingsley Coman ayaa lala xiriirinayay inuu xagaaga u dhaqaaqayo Manchester United iyo Chelsea, laakiin Goal iyo SPOX ayaa ogaaday in ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka France uu qeyb ka yahay qorshooyinka Julian Nagelsmann ee 2021-22. Goal
Raheem Sterling ayaa diyaar u ah inuu iska indho tiro xiisaha ay u qabaan xagaagan isla markaana uu kusii nagaado Manchester City. Manchester Evening News
Arsenal ayaa, sida laga soo xigtay Daily Mail , wadahadalo wanaagsan oo ku saabsan heshiis macquul ah la yeelatay Ben White. Daily Mail
Barcelona ayaa ku dhow inay soo gabagabeyso heshiiska Memphis Depay, sida ay qortay ESPN .
Bernardo Silva ayaa doonaya inuu ka tago Manchester City waxaana laga wada hadli doonaa heshiis is dhaafsi ah oo ku saabsan xiddiga Atletico Madrid Joao Felix, sida ay qortay Eurosport.
Xiddiga Cagliari Nahitan Nandez ayaa xiiseynaya kooxda Inter – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Arsenal ayaa aragtay dalab furitaan oo dhan 13.5 milyan oo euro ($ 19m) oo ay ku dooneysay ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Anderlecht Albert Sambi Lokonga – sida ay qortay Daily Mail .
Chelsea ayaa hogaamineysa loolanka loogu jiro saxiixa kubadsameeyaha Aston Villa Jack Grealish – sida laga soo xigtay Fichajes .
Manchester United ayaa u baahan doonta inay € 35 million (£ 30m / $ 42m) hadii ay rabto inay Kieran Trippier ka siiso Atletico Madrid, sida ay qortay Mundo Deportivo .